Waa maxay softwareka ugu wanaagsan ee iibka ah ee shirkadda Amazon?
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu lacag sameeyo, Amazon wuxuu bixiyaa dhamaan fursadaha uu ku sameeyo. Taasi waa sababta ganacsiga ee Amazon waa mid aad u ballaadhan maalmahayaga. Ganacsiyada ganacsiga intooda badani waxay soo saaraan badeecadahooda Amazon taasoo ka dhigaysa midaas tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Wixii intaa ka badan, Amazon waxay u baahan tahay raacitaanka shuruudaha dejinta aasaasiga ah si aad uga dhigto alaabtaada muuqaalka.
Haddii aad cusub oo ku saabsan Amazon, waxaa kugu adkaan kartaa in aad tagto TOP ee raadinta Amazon iyada oo aan hirgelin barnaamij kasta oo xirfad Amazon. In this article, waxaan ka wada hadli doonaa software ugu fiican iibka online for kuwa jecel inay iibiyaan on Amazon sida pro. Sababaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad isticmaasho software Amazon
Si aad u sameyso faa'iido weyn, waxaad u baahan tahay inaad is-maal-galiso naftaada
. Amazon waa wax walba oo ku saabsan maalgashiga kor u kaca, labadaba iyo lacag. Hadaad waxyaabahaan ku soo saartid shaqadaada, waxaad bilkasta ka faa'iidi doontaa faa'iido dulsaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan had iyo jeer u baahanahay in ka badan; waa jidka dunidu u shaqayso.
Waxaa jira 24 saac oo kaliya maalintii, iyo xataa ganacsatada Amazon waxay u baahan yihiin inay seexdaan. Sidaa darteed, haddii aad adigu wax walba oo aad adigu iskaa wax u qabato, waxaad halis u tahay inaad lumiso naftaada shaqadaada. Bal qiyaas in aad u baahan tahay in aad sameyso cilmi baaris, kobcin, raadraacid iyo falanqeyn ku sameysid adiga, isbarbardhig badan oo xog ah manhajka. Iyo sidee ku saabsan xirashada iyo u dirista boqolaal amarro maalintii? Maya, waa wax aan macquul ahayn. Amazon waxay ka dhigi kartaa noloshaada inay si fudud kuu siiso fulinta xirfadle. Waxay micnaheedu tahay in dhammaan maraakiibta, bixinta iyo taageerada arimaha lagu xalin doono Amazon. Waxaad u diri kartaa alaabooyinka bakhaarada oo diiradda saarna kaliya ganacsigaaga Amazon. Si kastaba ha ahaatee, waa uun qeybtii dagaalka. Ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay koraan, markaa waxaad u baahan tahay inaad maalgashato qayb weyn oo ka mid ah maalintaada shaqo ee ganacsigaaga horumarinaya. Waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso liiskaaga, raadso keywords keywords cusub, raadinta jagooyinka sheyga on Amazon SERP, bilawdo waxyaabo dheeraad ah iyo kor u qaadaan adeegyada taageerada macaamiisha si ay u koraan wacyi gelinta ganacsiga iyo kobcinta dakhliga. Dhamaanba arrintan waxay qaadataa wakhti badan iyo dadaal. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay adeegyo dheeraad ah oo kaa caawin doona inaad maareyso waxyaalahan oo dhan. Xasuusnow, inaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso ganacsigaaga, ha ku jirto. Sida caadiga ah, ganacsatada kuwaas oo amar ku bixiya hantida weyn, dhammaantood iyaga oo aan taaban sheyga ama digniinta ku saabsan faahfaahinta yaryar.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay noocyo caafimaad oo ku saabsan horumarinta ganacsiga Amazon. Waxaad shaqaaleyn kartaa falanqeeyayaasha gudaha iyo khabiirada SEO ama waxaad ku tiirsanaan kartaa automation iyo software Amazon. Aniga ahaan, doorashadu waa cad. Isticmaalka qalabyada internetka, waxaad awoodi doontaa inaad wax kasta si sax ah u sameyso iyada oo aan ado kale. Waa furaha aad ku guuleysatay Amazon. Sidaas, aan ka wada hadalnay Amazon ee lagama maarmaanka ah iyo software-yada cilmi-baarista ee kuugu imaanaya adiga iyo horumarinta ganacsigaaga Amazon.
Barnaamijka ugu wanaagsan Amazon ee liiskaaga darajo hagaajinta
Waxaad u baahan tahay inaad bilowdo ciyaarta ciyaaraha fudud sida guusha. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la doorto suuq-geynta ugu wanaagsan ee suuqa iyo alaabooyinka aad tafaariiqda geyn doonto. Si loo fududeeyo hawshan, waxaad isticmaali kartaa qalabka Jungle Scout. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad hesho badeecad Amazon ah oo aad ka faa'iideysan kartid, dhakhso ah iyo bilaa shaqo la'aan. Isticmaalka qalabka Jungle Scout, waxaad yarayn doontaa khatarta aadna u kordhinaysaa faa'iido maxaa yeelay waxay kaa caawineysaa inaad hesho fursado ay ku taageeraan xogta ugu iibsashada Amazon ee suuqa oo laga fogaado khaladaad qaali ah. App appkan waxay bixisaa nidaam farsameed oo khaas ah si loo baadho badeecooyinka Amazon iyo macluumaad weyn oo macluumaad ah. Halkan waxaad dooran kartaa qaybaha, bartilmaameedka Sumarka Cuntada, iibka, dib u eegista, iyo wixii la mid ah.
Waxaa jira laba siyaabood oo aad u isticmaali karto barnaamijka Jungle Scout - adigoo adeegsanaya appka,.
Iyadoo loo adeegsanayo app app, waxaad heleysaa fursad aad ku hesho nuucyada faa'iidada leh iyo alaabooyinka ku jira dhammaan Amazon catalog. Kordhinta Tani waxay ku siineysaa fursad aad ku shaandheyn karto xogta Amazon oo dhan adoo adeegsanaya qaybta, qiimaha, iibka, iyo jaangooyooyin kale si ay kaaga caawiyaan sidii aad u heli laheyd alaabta aan la wehelin ee aad ka faa'iideysan karto.
Haddii aad isticmaasho qalabka Jungle Scout-ka ah fidinta Chrome, waxaad awoodi doontaa inaad sahamiso oo aad ansixiso waxyaabaha fikradaha ah markaad eegto. Waxaad awoodi doontaa inaad hubiso qiimaha alaab kasta, iibinta iibinta, tirinta dib u eegida iyo xitaa xog badan oo isbarbardhiga sheyga.
Iyada oo ka mid ah faa'iido darrada qalabkan, waxaan ku xisaabin karaa soo socda-soo celinta soo socota, toddoba maalmood oo keliya oo tijaabo ah oo aan dhamaystirnayn xogta oo dhan.
Marka aad fikrad ka haysatid alaab aad rabto inaad iibsato dukaamo, waa inaad hesho alaab jismi. Helitaanka badeecadaha iyo helitaanka shaybaarka ayaa ah dhibaato adag oo aan la dabooli karin marxaladda hore ee ololaha suuq-geynta ee Amazon.Shaqadani waxay inta badan cabsigelineysaa, sababtoo ah intooda badan alaab-qeybiyeyaasha ayaa dibadda ku jooga. Si kastaba ha noqotee, si aad u heshid alaab-qeybiye fiican ayaa u sahlanaan kara sidaad u maleyneyso. Aynu sheegno qaar ka mid ah qalabka kaa caawin kara hawshan.
Alibaba waa jaanad caanka ah ee Shiinaha oo aad ka iibsan karto bulk. Inta badan alaabooyinka ku saleysan halkan waxaa lagu soo saaray Aasiya. Taasi waa sababta ay qiimaha ay u sareeyaan haddii la barbardhigo wax soo saarka Maraykanka iyo Yurub. Sidaa darteed, Alibaba waa kharashka ugu wanaagsan. Marka ugu horeysa, waxay u egtahay mid aad u adag, laakiin waa inaad bilowdaa. Ugu horreyn, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso codsiyada iibsashada, ka dibna raadso alaabta wax iibsiga iyo xiriirka alaab-qeybiyaha adoo isticmaalaya email ama Skype. Ugu horreyn, waxaad u baahan tahay inaad weydiiso sheyga alaabta ee alaab-qeybiyeyaasha kala duwan inay awoodaan inay isbarbardhigaan tayada. Waa inaad ka warqabtaa in alaab-qeybiyeyaasha badani ay yihiin shirkado ganacsi oo fududeyn kara waxyaabo sahlan oo qaali ah. Waxaa intaa dheer, waxaa habboon in la xuso in Alibaba uu yahay Caliexpress oo muhiimad ahaan u leh shaybaarka leh farqiga kaliya ee yaraanta qiimaha. Si kastaba ha ahaatee, boggani waa sharci ka badan kuwa kale ee Ganacsiga Shiinaha.
Ka mid ahaanshaha iskaashiga Alibaba, waxaan ku tirtiri karaa kuwa soo socda:
waa cabsi in la bilaabo;
Waxaa jira waxyaabo badan oo nacas ah.
Waxyaalaha lagama maarmaanka ah ayaa kaa caawin doona inaad bilowdo bilow wanaagsan. Si kastaba ha noqotee wax soo saarka ayaa inta badan qaadanaya. Sidaas awgeed, waxaad waqtigan u isticmaali kartaa si karti leh adigoo u qaybinaya si aad u sheegtid abuuritaanka iyo is-wanaajinta Source .